Somalida waxbarashada u tageysa wadanka Maleysiya oo sii kordhaysa+SAWIRO – SBC
Somalida waxbarashada u tageysa wadanka Maleysiya oo sii kordhaysa+SAWIRO
Posted by editor on April 23, 2013 Comments
Waxaa Sanadihii Danbe ku soo badanayey Dalka Malaysia Soomaali badan oo waxbarasho u soo aadaysa dalka Malaysia waana dalka fududeeyey in Soomaalidu ku soo galaan viso la’aan ama ay airportga laga siiyo dal ku gal.
Waxaan Booqasho ku sameeyey Mid kamida goobaha ay somalida wax ka barato ee lagu magacaabo Malvin International College and University waxana wax badan ka wareestay oo iga waramay dhanka wax barashada iyo heerka uu maanta marayo Gudoomiyaha Waaxda Soomaalida ee Malvin International, Maxamed Abdi Samad Shalaqbeen oo aan ku booqday xafiiska Malvin International.
Maxamed ayaa sheegay in ay dad aad u faro badan ka qalan jabiyeen jaamacada hadana ay dad badan waxka bartaan iyagoo bixiyo shahadooyin uk ah iyo kuwo Dalka Malaysiyaa waxana ay dadaal dheer u galeen sidii ay somalidu ku heli lahayeen meel wax barasho fiican oo heersaraa.
Malvin International college and university waxaa sidoo kale wax ka barta arday kala duwan oo ka kala yimid qaaradaha aduunka waxaana haatan lagu wadaa in uu noqdo mid laba jibaarma xaga hormarka wax barashada.
Maxamed oo sii wata hadalkisii ayaa sheegay in ay gaarsiin doonaan dalka somaliya Malvin international “waxana umada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in aan u hayno waxbarasho tayo leh oo heer saraa”, sidaa darteena ay maalin kasta qaataan ardo faro badan oo Soomaaliya oo ka kala timid daafaha calaamka.
Dalka Malaysiya ayaa ah Dal aad ay Soomaalidu wax ugu barato waxaana Malvin international college and University ka mid tahay Meelaha ugu badan ee somalidu wax ka barato.
Hadii aad tahay Arday doonaya wax barashada Malaysiya kala soo xariir Maamulaha Malvin International.
Mohamed Abdisamad Shalaqbeen